आँखा सुख्खा हुने, लामो थकान, छाला तथा केशमा समस्या छ? नियमित AC मा त बस्नुहुन्न? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
आँखा सुख्खा हुने, लामो थकान, छाला तथा केशमा समस्या छ? नियमित AC मा त बस्नुहुन्न?
यस्तो छ समाधानका उपायहरु
मेरो लाइफस्टाइल || 21 February, 2021
गर्मीबाट राहत पाउन अचेल एसी (एयर कन्डिसनर) को प्रयोग बढ्न थालेको छ । अफिसहरूमा बढी प्रयोगमा आउने एसी अहिले घर–घरमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ । अफिसमा लामो समय काम गर्दा एसीको प्रयोग पनि उत्तिकै समय हुने गर्छ । एसीको हावामा लामो समयसम्म निरन्तर रहदाँ शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्ने गर्छ ।
लामो समयसम्म एसीको हावामा बस्दा साइनसको जोखिम बढ्छ । एसीको चिसो हावाले म्युकस ग्रन्थिलाई कठोर बनाइदिन्छ र हाछ्यूँ आउने तथा पिनास हुने समस्या बढ्छ । निरन्तर चार घण्टाभन्दा बढी एसीमा बस्दा टाउको दुख्ने समस्या पनि देखिन्छ ।
एसीको हावामा लामो समय बस्दा भाइरल इन्फेक्सनको खतरा हुन्छ । यसले रुघा–खोकीसमेत निम्त्याउँछ । विद्युत्वाट चल्ने हुनाले एसीको केही भाग तातोपनि हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा लामखुट्टे लुकेर बस्छन् । अफिसमा धेरै व्यक्ति एकै कोठामा काम गर्ने हुनाले लामखुट्टेमार्फत खतरनाक रोग फैलन पनि सक्छ ।
निरन्तर एसीको हावामा बस्दा आँखामा सुख्खापन आउछ । आखाँ सुख्खा हुँदै गएपछि पीडा महसुस हुनुकासाथै आँखा रातो हुने, पोल्ने र धेरै आँसु निस्किएर आखाँ सुख्खा हुन्छ, यसले भविष्यमा आँखालाई कमजोर समेत बनाउँछ । एसीको सीधा तल बसेको छ वा एसी आफूभन्दा अगाडि छ भने आँखाको जोखिम अझ बढ्ने गर्छ ।
दुई घण्टाभन्दा बढी समय निरन्तर एसीमा बस्दा छालामा असर पर्छ । एसीको चिसो हावाले छालाको चिल्लोपन सोसेर त्यसलाई सुख्खा बनाइदिन्छ । एसीले कपाल पनि सुख्खा बनाइदिन्छ । त्यसैले सकेसम्म एसीको हावाबाट टाढै रहेको राम्रो हुन्छ ।